OpenExpo Virtual Experience 2021, iray amin'ireo hetsika rindrambaiko Maimaimpoana malaza indrindra | Avy amin'ny Linux
OpenExpo Virtual Experience 2021, iray amin'ireo hetsika rindrambaiko Maimaimpoana malaza indrindra
Joaquin Garcia Cobo | 04/06/2021 21:30 | GNU / Linux, About us
Iray amin'ireo hetsika malaza sy manan-danja indrindra amin'ny sehatry ny rindrambaiko Espaniola Maimaimpoana ao Espana izay hitranga mandritra ny andro vitsivitsy, miresaka ny OpenExpo aho, izay noho ny antony ara-piarovana dia nanjary hetsika virtoaly tamin'ny fiantsoana ny tenany. OpenExpo Virtual Experience 2021.
Amin'ity taona ity dia averimberina ny endrika virtoaly napetraka tamin'ny taon-dasa, fa, ho fanampin'izay, Avy amin'ny Linux dia lasa ampahany amin'ny iray amin'ireo mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery hetsika.
Ny fanontana amin'ity taona ity dia hanasongadina andriamanitra iray hafa, the great Chema Alonso, mari-pahaizana eran'izao tontolo izao amin'ny resaka fiarovana ny solosaina ary iray amin'ireo olo-malaza indrindra amin'ny teknolojia miteny espaniola ao anatin'ny tontolon'ny teknolojia. Saingy tsy izany ihany. Ho fanampin'ny fananana an'i Chema Alonso, ny OpenExpo dia ho heniky ny lohahevitra vaovao ary solontena sy orinasa tsy mamorona fotsiny izany ny panorama teknolojia any Espana ary ampahany amin'i Amerika Latina saingy nanana laza malaza izy ireo tato anatin'ny volana vitsivitsy, amin'ny tranga maro tsy mila azy ireo ary amin'ny maro hafa dia nalaza eran'izao tontolo izao ny lazany.
Mampalahelo fa ny OpenExpo dia mbola tsy mari-pahaizana ara-teknolojia manerantany ary midika izany fa ny orinasa lehibe toa an'i Google na Amazon dia tsy liana amin'ilay hetsika fa tsy maintsy milaza isika fa hanana ny fisian'ny mpikambana ao amin'ny Dell Technologies, Oracle, Intel na OVHcloud ankoatry ny hafa. fa lehibe be ilay lisitra ary mandrakotra lohahevitra teknolojia maro.
Ireo lohahevitra hiatrehana ny OpenExpo Virtual Experience 2021 dia andian-tsoratra Chain, Big Data, Cloud, Cybersecurity, rindrambaiko loharano misokatra, ho fanampin'ny fampifangaroana azy amin'ireo lohahevitra hafa toy ny digitalisation, ny fiofanana momba ny IT sy ny asa, ny Fintech, ny fahazoana miditra, ankoatry ny lohahevitra hafa.
Ahoana ny fomba hiadian-kevitra amin'ireo lohahevitra ireo amin'ny OpenExpo Virtual Experience 2021?
Toy ny tamin'ny fanontana teo aloha, dia tsy maintsy tadidintsika fa miatrika isika ny andiany faha-8 an'ny OpenExpo, hisy ny lahateny, fihaonana, fihaonambe, fampirantiana, atrikasa, fihaonana, forum, latabatra boribory sns ... Ary amin'ny alàlan'ireo fomba ireo dia afaka mandray anjara amin'ity hetsika ity ireo mpampiasa miaraka amin'ireo mpandahateny amin'ity taona ity.
Ny fanatrehana sy ny fandraisana anjara dia virtoaly tanteraka ary 100% amin'ny Espaniôla, noho izany dia vintana ny mpampiasa miteny espaniola satria tsy hiankina amin'ny olana ara-jeografika handray anjara amin'ny OpenExpo Virtual Experience 2021. Hitranga ny hetsika manomboka amin'ny 8 Jona ka hatramin'ny 11 Jona, samy tafiditra. Azontsika atao ny mamaky ny lisitry ny mpandahateny sy ny fandraisany anjara ny tranonkala ofisialin'ny hetsika.
Nilaza taminay ny fikambanana fa amin'ity fanontana vaovao ity dia hisy vaovao vitsivitsy, fa amin'izao dia roa fotsiny no fantatsika. Ny iray amin'izy ireo dia ny OpenTrivial, trivia ataon'ny ekipa, ny ekipa tsirairay avy dia ho maherin'ny 4 izay hamaly ny fanontaniana momba ny tontolon'ny teknolojia sy ny Source Source.
Ny faharoa amin'izy ireo dia "Ny feon'ny mpijery", hetsika iray izay tsy fantatsika afa-tsy ny anarany ary mba hahalalantsika bebe kokoa momba azy io dia tsy maintsy andraisantsika anjara amin'ilay hetsika (araka ny ampahafantarin'ny fikambanana antsika).
Ny fandraisana anjara amin'ny OpenExpo Virtual Experience 2021 dia azo atao amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny rohy ofisialin'ny hetsika:
Na azontsika atao amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialin'ny hetsika.
Ny vondron'olona Open Source dia lehibe sy mahery noho ny fisokafany ary ny lafiny fiaraha-miasa, lafiny izay mahatonga ny OpenExpo Virtual Experience ho hetsika iray hafa mahaliana Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » OpenExpo Virtual Experience 2021, iray amin'ireo hetsika rindrambaiko Maimaimpoana malaza indrindra
Tiako ny zava-misy misy an'io karazana hetsika io, Misaotra anao nanao tatitra!
Misaotra betsaka anao namaky anay. Manamarika izay lazainao anay izahay. Mampalahelo fa tsy dia misy hetsika firy, na dia misy aza ny sasany. ;-)
NOS-P1: Mikaroka ny Source Open Open Netflix midadasika sy mitombo - Fizarana 1
Blender 2.93 LTS: Izay rehetra momba ny Blender sy ny kinova LTS vaovao misy